တကယ်အဖြစ်မှန်လေးပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » တကယ်အဖြစ်မှန်လေးပါ
Posted by မိုးပွင့်ဖြူ on Oct 27, 2011 in Copy/Paste | 26 comments
မိုးပွင်က အမေတိုနဲခွဲပြီး အလုပ်2နေတောအမေ ကအလွန်ဆိုးရိမ်းတတ်ပါတယ် ဖုန်းဆက်တိုင်းလဲမှာတယ် သူများတိုက်တဲကော်ဖီမသောက်နဲ သူများကြွေးတာမစားနဲဆိုပြီ တို့ဆေးမိတာတိုတွေသူကြားနေရတာတွေပြန်ပြောတတ်ပါတယ်။နေ့တိုင်းဘုရားရှစ်ခိုးဖို့မှာတတ်သလို ဘုရားမရှိခိုးမိဘူးပြောရင်လည်အလွန် စိတ်ညစ် စိတ်ဆင်းရဲနေတတ်တဲအမေပါ ။
ဒီနေ့တောအမေကဖုန်ုးဆက်ပါတယ် မဆက်တာလဲကြာလို့ပါ ကျွန်မတို့ မြို့လေးမှာဖြစ်ပွားတာတဲ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အလိမ်ခံရတဲအကြောင်းပါ။ ကျွန်မတို့ထက်တောငယ်ပါတယ် အခုဆိုအသက် 25ကျော်လောက်ရှိပါပြီ ။အိမ်က လည်အဆင်ပြေပါတယ် တိုက်နဲမြိုလည်ကောင်မှာပါ ။
ဒီနေတောအဲဒီကောင်မလေးကိုလူတစ်ယောက်ကလာလိမ်ကြောင့် အဲဒီလူက သူကအရာရှိတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီ ကောင်မလေးကို သိန်3း0 တင်တောင်းပါတယ် ။သိန်းသုံးဆယ်ဆိုတာလဲ အကြွေးလိုပြောပါတယ် ။ကျွန်မတိုအရပ်ဒေသက မိန်းကလေးတွေက်ိုတင်တောင်းရတဲအရပ်ပါ။ ကောင်းမလေးနဲလက်ထပ်ပြီ ကောင်မလေးကိုခေါ်သွားမယ်ဆိုပြီကားလက်မှတ်တွေဖြတ် မနက်ဆိုထွက်တောမယ်ပေါ ။ဒါပေမဲညမှာ သူမိဘတွေက သံသရရှိ လိုရဲကိုဖမ်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်။ ရဲကစစ်မေးတောလူလိမ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီကောင်မလေးကိုခေါ်သွားပြီ ရောင်စားမယ်လို စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါတယ် ။အဲဒီလူလိမ်ကို အမှုဖွင်ထားကြောင်းလည်ပြောပါတယ် ။
မလွယ်ပါလား။ ခုခေတ်က မိန်းကလေးတွေ ကလေးတွေ ရောင်းစားရင် ဈေးကောင်းရနေတဲ့ ခေတ်ဗျ။ လူတွေကလည်းလောဘနဲ့ ပက်သတ်လာရင် အမှောင်ဖုံးနေကြတာ။ မလွယ်ပါ။
ဟယ် … မိဘတွေကလည်း … ဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်း မသိတဲ့လူ ….သိန်းသုံးဆယ်ကို အကြွေးနဲ့တင်တောင်းသွားတာတောင် တခါတည်း သမီးထည့်ပေးလိုက်ရအောင် ပိုက်ဆံမက်ကြသလားဟင် … ။ သမီးတစ်ယောက်မွေးပြီး … မျောက်ပြ ဆန်တောင်းချင်တယ်လို့ပဲ .. ဂရုဏာဒေါသနဲ့ ဝေဖန်လိုက်ချင်ပါတယ် … ။
တော်သေးတယ် … ကျွန်မမိဘတွေ သားသမီးဗန်းပြပြီး စီးပွားရှာစားမယ့် လူမျိုးမဟုတ်တာပဲ … ။
ပြောရရင် ဒါမျိုးတွေကတော့ ဖတ်ပြီးသား ပုံပြင်ကြီးလိုပဲ ရိုးနေတဲ့ လုပ်ကွက်တွေပါ..
ကျုပ်တို့ လူမျိုးတွေက…လည်တဲ့လူက သောက်မြင်ကတ်လောက်အောင် မွှတ်နေအောင် လည်ပြီး
နုံတဲ့လူကလဲ အပေါ်က မိန်းကလေးလိုပဲ..သောက်မြင်ကတ်လောက်အောင် နုံတာကလား..
ဖြစ်တာမကြာသေးဘူးဆိုရင်တော့..လူကုန်သည်လည်တာထက်..မိန်းကလေးဘက်က နုံတာက များနေတာ
ဟုတ်တယ်သိပ်မသိတဲသူကိုယုံပြီး ဘ၀ကိုပုံအပ်လိုက်တယ်ဆိုတာ သူလဲပညာတတ်တစ်ယောက်ပါ ဘာလိုအဲလောက်ပဲတွေးပြီးနေတာလဲမသိတောပါဘူး……….
ဘယ်လိုကြီးလဲ မသိဘူး သိပ်တော့နားမလည်လှဘူး။ တမျိုးကြီးပဲ တင်တောင်းတယ် ဆိုတာ လက်ထပ်ဖို့ ဆိုလိုတာလား…
ရိုးချက်တော့ဗျာ၊ လူလိမ်အတွက် အချက်ပဲပေါ့။
မိုးပွင်တိုဆီမှာလေ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကိုလက်ထပ်တောမယ်ဆိုမိန်းကလေးရှင် အမေအဖေဆီသွားပြီး ဘယ်လောက်တင်တောင်ပါတယ်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံ သိန်းဘယ်လောက် ရွှေဘယ်လောက်သား ကုန်းတွေလယ်တွေရှိတဲလူဆိုလဲ ကုန်းဘယ်နှဧက အဲလိုပေးရပါတယ် အဲဒါကို တင်တောင်းတယ်လိုခေါ်တာပါ
ပိုက်ဆံရှိတဲမိဘက မိန်းကလေးရှင်ဆို သိန်းငါးဆယ်တို့ အဲလောက်တင်တောင်းရပါတယ်..
အဲဒီ တင်တောင်းတယ် ဆိုတာကိုသိပ်မရှင်းသေးဘူုး အမ။ တင်တောင်း လိုက်တဲ့ ပိုက်ဆံကို
မိန်းကလေးရှင် အမေအဖေကယူတာလား? မင်္ဂလာဆောင်ရင် အဲဒီပိုက်ဆံကို လက်ဖွဲ့အနေ
နဲ့ပြန်ပေးမှာလား? သိန်းငါးဆယ်လာက်တင်တောင်းရရင် မိန်းမရဖို့ မလွယ်ပါ့လား
မိဘတွေကလည်း အဲလိုမသိတဲ့သူနဲ့ အရမ်းကာရော သဘောတူတာပဲလား
ဒါနဲ့ အဲလူက အရင်ကတည်းက မိုးပွင့်တို့မြို့ကို ဝင်ထွက်နေကျလား
အခုမှတွေ့ဘူးပြီး သိန်း (30) တင်တောင်းတာနဲ့ သဘောတူလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့
မတွေးဝံ့စရာပဲ နောက်ပြီး သံသယ၇ှိတယ်ဆိုရင်လည်း စောစောစီးစီး ရဲကိုပြောတာ
မဟုတ်ဘူး အခုတော့ လက်ထပ်ပြီး မနက်ကျရင်ခေါ်သွားမယ်ဆိုမှပဲ တိုင်ရတယ်လို့
ကောင်မလေးက ကြားထဲက အချောင်လက်ထပ်ရလိုက်တာပေါ့
တစ်ခုတော့ တော်ပါသေးတယ် ကောင်မလေးကို ဟိုလူခေါ်သွားပြီးမှ သံသယမဖြစ်လို့ …
ရိုးတာထက်၊တော်တော်များများမြန်မာတွေ အလကားရတိုင်းအချောင်လိုချင်စိတ် များနေတဲ့လော ဘရှိကြတယ်၊သည်တော့မက် လုံးပေးပြီးလည်တဲ့သူ တွေအတွက် အရမ်းလုပ်စားရလွယ်တာ ပေါ့၊ ပြောရရင် တစ်ပြည်လုံး နီး ပါးပဲ၊ သားသ္မီးချင်းမစာနာလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး၊ သည်ဖြစ်စဉ်အရကြည့်ရင်မိဘ ကို ငတိက စရံ (10) သိန်းလောက်ပေးခဲ့ရင်တောင်၊ အဲသည်မိဘလုပ်သူတွေ ရဲတိုင်ချင်မှတိုင်အုန်းမှာ-လိမ်တဲ့ငတိ က ပိုအလကားလိုချင်တာကပေါ်တင်ဖြစ်သွားတယ်၊လုံးဝအရင်းမပါပဲလုပ်လိုက်လို့၊ သည်ကောင်ကြံ့ဖွတ်ပါတီဝင်တော့မဟုတ်လောက်ဘူး၊ ကြံ့ဖွတ်ကသူ့ထက်လည်တယ် နဲနဲပေးသယောင် ပြပြီး များများယူတတ်တယ်-တို့မြန်မာနလဗိန်းတုန်းတွေ- ပေးလိုက်ရတာ – ဘာမှကိုမကျန်သလောက်ပဲ။ တော်ပြီတော်ပြီ ဆက်ပြောရင်-တော့ ဟီး—ဟီး။
ဘယ်ကမှန်း ဘယ်သူမှန်း မသိပဲ အရာ၇ှိဆိုတာနဲ ယုံစ၇ာလား… ?
ဒါပေမယ့် မ“အ” ကြဘို့တော့လိုတယ်ဗျ
“အ”တဲ့လူမှာ လောဘရှိလာရင် သေချာတယ် အလိမ်ခံရတော့မယ်..။။
ဒီလောက်ထိ အ ဒယ် ဆိုဒါဂဒေါ့
ဒေါ်ပု ဆိုတာ ငရုတ်သီးမှုန့်
ဒီပို့ စ်ကို တွေ့ တော့ ၊ ဖေ့ဘုတ်မှာ တင်တဲ့ “ဗေဒင်ဆရာ နဲ့ မိန်းမပျို ” ဇါတ်လမ်းကို သွားသတိရမိတယ် ဗျ ။
ဗေဒင်ဆရာက ရည်းစားပူမိလို့ လာမေးတဲ့ မိန်းမပျိုလေး ကို မကွဲအောင် ဘယ်လို… ဘယ်လို လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဆိုကလား ပဲ ။
အဲဒီဇါတ်လမ်းကို အသေးစိတ်သိချင်သူများ ရွာတော်ရှင်မ ထံတွင် ပါးပိတ်ရိုက်မက်ဆေ့ ၊ အဲလေ ၊ မွှားလို့ပရိုက်ဗိတ်မက်ဆေ့ ဖြင့် တောင်းဆိုနိုင်ပါတယ် ။
မိုးဇက် ရေ ရှစ်တော့မခိုးလိုက်ပါနဲ့ ။ အက်ဒစ်ပို့ စ်နဲ့ ပြန်ပြီး ပြင်လိုက်ပါဦးနော ။
လုပ်ပြီ ကိုပေတို့ကတော့ post ရေးတဲ့သူကိုသေချာကြည့်ပါဦး
ဧကန္တတော့ ရေချိန်ကိုက်နေပြီထင်တယ် :D
ဒါရိုက်တာ ပေတို့ ကတော့ ပြောလိုက်ရင် တလွဲချည်ပဲ
ဟီး ဆောတီးပါဂျာ မိုးပွင့်ဖြူ ရေ
ဟုတ်ပ ဟုတ်ပ မွှားသွားဒယ်
ဇာတ်လမ်းက မရှင်း မရှင်းနဲ့မိုးပွင့်ဖြူရယ်။
ညည်း အမေကလည်း သူ သေချာ မသိတဲ့ အရပ်ပြော ဇာတ်လမ်းကို
ညည်းကို ဖုံးဆက်ပြီး ဖောက်သည် ချထားတဲ့ ပုံပဲ။
အလိမ်ခံရမှာပေါ့ကွယ်။ ညည်းတို့ မြို့ သူတွေက ၀စ္စနှစ်လုံးပေါက်တို့ ၊ အောက်ကမြင့် တို့ 
nigimi77 ရေ မိုးပွင့်တိုမြို့ အိမ်ခြေ 1500 -2000လောက်ပဲရှိပြီး ဘယ်သူ ဘယ်ဝါ ဆိုတာအကုန်သိပါတယ်…..ယ်သူကဘယ်သူသားသမီးဆိုတာအကုန်သိကြတဲမြို့လေးပါ အရပ်ပြောဇာတ်မဟုတ်ပါဘူး …တကယ်ဖြစ်တာကိုစိတ်ပူပြီး ပြောပြပေးတာပါ ဆင်ခြင်နိုင်အောင်လို့လေ …..
ရွှေဘိုသူကြီးရယ် တစ်ခါမှ မရေးပါလားလို့ တွေးနေတာ ရေးလိုက်တော့လည်း မိန်းကလေးတွေ အကျိုးရှိမဲ့ စာစုလေးဖြစ်နေပါလား ကောင်းပါတယ် နယ်တွေမှာက သိတယ်မလား ဘယ်ကမှန်းမသိတဲ့ လူတွေကိုလည်း ချစ်ရင်ယူ ပိုက်ဆံရှိရင် ယူကြတော့ တောဓလေ့ ပျောက်နေပြီဗျာ တစ်ခါကလည်း ကြာမိပါတယ်အဲလို ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ပုဒ်
ဆက်ရေးနော် အားပေးတယ် နယ်သားအချင်းချင်းတွေပဲ
ကျနော်ကတော့ တင်မတောင်းချင်လို့ ဒီဘက်လစ်လာတာ တင်စရာလည်း ဘာမှမရှိဘူးလေ ဟဲဟဲ မမိုးပွင့်ဖြူ ရှာပေးပါအုံး ချစ်တီးမုန့် လောက်နဲ့ ကျေနပ်မဲ့ ဗိုင်းကောင်းကျောက်ဖိ လေးတစ်ယောက်လောက်
ရွေဘိုသားရေ မမကြားသွားလိုစိတ်ဆိုးနေအုံးမယ်နော် အချင်းချင်းမို့သတိပေးတာ ဟဲဟဲ…
ကြောင်ကြီးလည်း စိတ်ကြိုက် အလန်းလေးတွေ့ရင် သန်းပေါင်းများစွာနဲ့ တင်တောင်းနိုင်ပါတယ်။
ပြောတော့ အရာရှိတဲ့ ဘယ်ဌာနက အရာရှိမှန်းမသိ … တင်တောင်းတာက သိန်း (၃၀) ပြီးတော့အကြွေးတဲ့ အဲဒါကိုတောင် မိဘတွေက သမီးကို ထည့်လိုက်ဖို့စဉ်းစားသေးတယ် … တော်သေးတာပေါ့ သံသယရှိပြီး ရဲကိုဖမ်းခိုင်းလိုက်လို့ .. မဟုတ်လို့ကတော့ ကောင်မလေးဘ၀က မတွေးဝံ့စရာပဲ …။